(tonga teto avy amin'ny Kaontinanta)
Ny kontinenta na tanibe dia tany midadasika mitohy hodidinin-dranomasina manontolo na amin'ny ampahany izay lehibe lavitra noho ny nosy sady onenan'ny vahoaka amin'ny firenana maro eto ambonin'ny Tany. Miovaova ny tena famaritana ny hoe kontinenta arakaraka ny taranja iresahana azy ka mahatonga ny isan'ny kontinenta hiovaova. Misy ohatra ny mpanoratra manao an'i Eorôpa sy i Azia ho kontinenta roa, nefa misy ny manambatra azy ka miantso azy hoe Eorazia noho izy ireo tany mitohy tsy misy fahatapahany. Miova eo anelanelan'ny efatra sy fito noho izany ny isan'ny kontinenta.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kôntinenta&oldid=993519"
Dernière modification le 8 Jiona 2020, à 20:15
Voaova farany tamin'ny 8 Jiona 2020 amin'ny 20:15 ity pejy ity.